Bogga Ciyaaraha, 26 November 2015 page 1
Ciyaaraha Adduunka 2014 oo Brazil ka Furmey
Koobka Adduunka ee 2014-ka ayaa ka bilowdey magaalada Sao Paolo, iyadoo dalka martida loo yahay ee Brazil ay dadka badankii filayaan inuu markii lixaad ku guuleysto koobkan.
Sawirro: Koobka Adduunka ee Brazil
Brazil waxaa ka furmaya ciyaaraha koobka Adduunka oo ay ku tartamayaan 32 kooxood oo ka kala socda caalamka.
Goolhaye Axmed: Rag ka Rooni ayaan Muujinay
Goolhayaha xulka qaranka Soomaaliya, Axmed Cabdalla ayaa VOA-da uga warramay ciyaartii galabta dhexmartay xulalka Soomaaliya iyo Burundi ee ka dhacday Kampala. Ciyaartaasi ayaa xulka Somalia looga adkaaday 5-1.
Cayaarihii Olombikada London oo Xalay Soo Xirmay
Xalay ayaa waxaa si rasmi ah loogu soo xiray Magaalada London ee dalka Ingiriiska cayaarihii olombikada ee aduunka ee halkaa ka socday.
Mo Farah oo Wareysi Siiyey Idaacadda VOA
Orodyahanka reer Britain ee asalkiisu Soomaaliga yahay ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyey Idaacadda VOA waxa uu kaga hadlay guushii uu gaaray
Mo Farah oo ku Guuleystay Biladdii Labaad
Orodyahan Maxamed Faarax ee u orda Britain ayaa maanta ku guuleystay biladdii labaad ee dahab ah isagoo orday tartanka orodka 5kun ee mitir.